सुदूरपश्चिम: देउवाले बाजी मार्लान कि भीम रावलले ?
असार १३,धनगढी ।
आफ्नै जिल्ला अछाममा एमालेलाई जिताउन रावललाई जति सजिलो छ, देउवालाई आफ्नो जिल्ला डडेल्धुरामा निकै ठूलो समस्या देखिएको छ । किनभने डडेल्धुरामा काँग्रेसभित्र धेरै बागी र असन्तुष्टहरु छन् ।राष्ट्रिय राजनीतिका दुई खेलाडी हुन्, शेरबहादुर देउवा र भीम रावल । देउवा काँग्रेस सभापति हुन् भने रावल एमालेका उपाध्यक्ष । देउवाले पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसके भने रावल प्रधानमन्त्रीको लाइनमा छन् ।
सुदूरपश्चिममा आफ्नै खाल पकड रहेका यी दुई नेताले यसपटक स्थानीय निकायलाई पनि आफ्नो अस्तिव्यसँग जोडेका छन् । त्यसैले रावल लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममै केन्द्रीत छन् भने देउवा केहीदिन अघि मात्रै आएर चुनावी माहौल सिर्जना गर्नमा उद्दत छन् । आफ्नै जिल्ला अछाममा एमालेलाई जिताउन रावललाई जति सजिलो छ, देउवालाई आफ्नो जिल्ला डडेल्धुरामा निकै ठूलो समस्या देखिएको छ । किनभने डडेल्धुरामा काँग्रेसभित्र धेरै बागी र असन्तुष्टहरु छन् ।
यीसँगै प्रदेश नम्बर ७ को सबैभन्दा बढी मतदाता भएको कैलाली जिल्लामा कस्ले बाजी मार्ला भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । विगत केही समयदेखि अनेक विभेद र उत्पीडनमा पर्दै आएका कैलालीबासीहरु यतिखेर आफ्नो स्वतन्त्रतालाई जायज ढङ्गले प्रयोग गर्नमा सजक र सचेत छन् । २०७० सालको संविधान सभाको चुनावमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले देखाएका महत्वकांक्षी आश्वासनका पीडित कैलालीबासीहरु अहिलेसम्म पनि छन् । कैलालीबाट जितेर गएका प्रतिनिधिहरु राज्यमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म भए ।
तर, बिडम्वना न कृषिमा सुधार भयो, न स्वास्थ्यमा सुधार भयो, न अन्य संरचनामा । बरु उल्टै राजनितिक आवरणमा सामाजिक सदभाव विथोलिने अनि पहाडी र थारु समुदायबीच आपसमा द्वन्द्व निम्त्याउने काम भए । कहिले माओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुक्राएर अलगै बनाउने नाममा कैलाली बन्दक बनाए त कहिले काँग्रेसले सुदूरको अस्तित्वनै हराउने गरी प्रदेश नं.७ निर्माण गर्ने योजनामा सारथी बने ।
टीकापुर घटनाको घाउ पनि अझै यहाँका जनताको मनमा ताजै छ । ठूलो राजनीतिक डिजाइनमा घटेको उक्त घटनामा २ बर्षीय बालक र एक एसएसपीसहित ८ जनाको निधन भएको थियो । उक्त घटनाका दोषिहरु र प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका रेशम चौधरी जस्ता अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले करोडौँको रकम र फूलमालाले स्वागत गरेको छ । यो भन्दा अर्को विडम्बना र दुःख पीडितलाई जीवनमा अरु के नै हुन सक्छ र ! देउवा सरकारले न्यायको बलत्कार गरेको छ ।
पीडितले न्याय पाउने अभिलासा यो सरकारले खरानीमा परिणत गरिदिएको छ । कैलालीका जनताहरु यसको वदला लिन आतुर देखिएका छन् । कहिले जातका नाममा, कहिले क्षेत्र र भूगोलको नाममा कैलालीलाई अस्थिर बनाउनेहरुलाई कैलालीवासीहरुले राम्रोसँग चिनेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर काँग्रेस र माओवादीलाई नै पर्ने देखिएको छ ।
यहीकारण यो बीचमा माओवादी केन्द्रमा धेरै पहिरो गयो । राप्रपा नेपालमा पनि उस्तै देखियो । एक उपमहानगरपालिका, ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कैलाली जिल्लामा जम्मा १३ स्थानिय निकाय छन् । मुख्य प्रतिस्पर्धा काँग्रेस र एमालेकै बीचमा हो । तर, अन्य जिल्लाको तुलनामा कैलालीमा भने एमालेले जित्ने अड्कलबाजीहरु गरिएको छ ।
सोडारी विद्यार्थी नेता हुन् ।